Maraykanka: Itoobiyaan u ololaynaya qorshaha HR 2003.
Bannaanbax Itoobiya ka dhan ah oo ka dhacay Denmark.
Baarlamaanka Yurub oo ka hadlay denbiyada dagaal ee Soomaaliya.
15-ka Nov sanadguuradii 2aad ee xasuuqii Q/daharre( Damaca gumaysiga iyo diidmada waddaniga).
Maraykanka: Itoobiyaan u ololaynaya qorshaha HR 2003
Kooxo u badan taageerayaasha xisbiga CUDP ayaa olole ballaadhan ugu jira sidii Senedka Maraykanku u ansixin lahaa qorshaha Itoobiya lagu cunaqabataynayo ee HR 2003, kaasoo hadda horyaalla Golaha Senedka Maraykanka, ka dib markii uu Golaha Wakiillada ee Maraykanku soo ansixiyay.
Qorshahan ayaa ku baaqaya in dowlada Maraykanku joojiso caawimada dhaqaale iyo midda millatari ee u fidiso xukuumadda Itoobiya, isla markaana maxkamada la saaro saraakiisha iyo masuuliyiinta Itoobiya ay ka qayb qaatay xasuuqa Ogaadeenya.
Itoobiyaanka Maraykanka ku nool ayaa wada dadaallo ay ku baadi-goobayaan sidii qotshahaas loo ansixin lahaa, waxayna Golaha Senedka u gudbiyeen cabashooyin kala duwan oo ay kaga cabanayaan xadgudubyada ay dadka rayadka ah u gaysato xukuumadda Meles Zenawi, iyagoo xubnaha Senedka ku dhiirr galinaya inay meelmarinta qorshahaas u codeeyaan.
Dadaallada ay dadkaasi wadaan waxaa ka mid ah iyagoo dhalliilo u gudbinaya xubnaha Senedka ee ka soo horjeeda meelmarinta qorshahan. Xubnaha Senedka ee dhillaalaha noocan ah loo gudbiyay waxaa ka mid ah Senetarka lagu magacaabo James Inhofe oo laga soo doorto Oklahoma City, kaasoo dad badan oo mawqifkiisa ka soo horjeeda ay bannaanbax ku sameeyeen xafiiskiisa talaadadii la soo dhaafay.
Bannaanbaxayaashan ayaa Senetarkan ugu baaqay inuu taageero xorriyada iyo dimuqraadiyada, isla markaana ka fogaado inuu taageero kaligii taliye argagixiso joogto ah ku haya shacabkiisa.
Magaalada Copenhagen ee dalka Denmark waxaa khamiistii ak dhacay bannaanbax wayn oo looga soo horjeedo xasuuqa ay ciidammada gumaysatada Itoobiya ka wadaanka caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Wariyaha RX ee magaalada Copenhagen, oo goobjoog ka ahaa bannaanbaxan ayaa sheegay in dad aad u fara badan oo ka yimid gobollada kala duwan ee dalka Denmark ay ka qayb qaateen bannaanbaxaas.
Bannaanbaxan waxaa lagu qabtay ka soo horjeedka xarunta safaarada Maraykanku ku leeyahay magaalada Copenhagen, iyadoo ay bannaanbaxayaashu safaarada u gudbiyeen cabasho qoraal ah oo ay kaga cabanayaan sida ay dowlada Maraykanku ugu taageerayso gumaysatada Itoobiya xasuuqa iyo gumaadka ay ka wado dalka Soomaaliya.
Bannaanbaxayaashan ayaa ku dhawaaqayay hal-ku-dhagyo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin denbiyada bani’aadamnimada ka baxsan ee ciidammada Itoobiya ka galayaan dadwaynaha rayadka ah ee soomaaliyeed iyo sida ay dolwada Maraykanku ugu taageerayso.
Baarlamaanka Yurub ayaa khamiistii ku dhawaaqay nin baadhis madaxbannaan lagu sameeyo denbiyada dagaal iyo xadgudubka xuquuqda aadanaha ee ka dhacaya caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Baarlamaanka Yurub wuxuu khamiistii soo saaray go’aan uu si wayn ugu canbaareeyay xadgudubyada khatarta ah ee xuquuqda aadanaha ee ay galayaan dhinacyada ku dagaallamaya magaalada Muqdisho. Go’aankani wuxuu ku baaqayaa in la qabto guddi madaxbannaan oo soo baadha denbiyada dagaal iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ka dhacay.
Go’aabnku wuxuu sidoo kale ku baaqay in xabbad joojin degdeg ah la sameeyo, iyo in gaar ahaan si dhakhsa ah loo joojiyo weerarrada loo gaysto dadka rayadka ah. Wuxuu kaloo go’aankani ku baaqayaa in la xoojiyo xayiraada hubka ee saran dalka Soomaaliya.
Beryihii denbe oo dhan waxaa sii kululaanayay dagaallada dhex maraya ciidammada gumaysatada Itoobiya iyo kooxaha soomaaliyeed ee la dagaallamaya, iyadoo ciidammada Itoobiya ay sidii lagu yaqaanay si ba’an u xasuuqeen dadwaynaha rayadka, ka dib markii dhirbaaxooyin ad-adag loo gaystay. Ilaa iyo hadda si dhab ah looma garanayo dadka rayadka ah ee ciidammada Itoobiya ku laayeen magaalada Muqdisho, hase yeeshee waxaa la filayaa inay boqollaal gaadhayaan.
Waxaa sidoo kale magaalada ka qaxay dad aad u badan oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo 170,000 qof, kuwaasoo intooda badani ay ku tabaalaysan yihiin degmooyinka ku teedsan magaalada Muqdisho.